Ọ bụ polar vortex na ihe nsonaazụ ọ nwere | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe bụ poor vortex
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ihe dị omimi gbasara ihu igwe a na - akpọ polar vortex. Ọtụtụ ndị mmadụ na-emeso ya dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe ịtụnanya na-eme ka poolu ugwu wee gabawanye na ndịda. Nke ahụ bụ, ihe ọ na-eme bụ na ọnọdụ okpomọkụ n'akụkụ dum nke ugwu ugwu, n'agbanyeghị osisi.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe oke ihu igwe dị na ya na ihe nsonaazụ ọ nwere na ihu igwe nke ugwu ugwu.
1 Kedu ihe bụ poor vortex
2 Isi atụmatụ
3 Ihe si na polar vortex pụta
4 Curiosities nke polar vortex
Mgbe anyị na-ekwu maka vortex polar, anyị na-eche nnukwu mpaghara nke nrụgide dị ala nke na-emechi nso okporo osisi nke ụwa. Dị ka ọ na-adị, poor vortex a juru ebe niile na pole north. Mpaghara a nke obere nsogbu nwere ikuku oyi siri ike nke na-eme ka okpomoku daba. A na-akpọ ya vortices n'ihi na ọ na-ezo aka na ntụgharị nke ikuku a nwere megide agịga elekere ma mee ka ikuku oyi dị ogologo oge n'akụkụ okporo osisi. Polar vortex na-ebelata n'oge ọkọchị ma na-abawanye n'oge oyi.
Mgbe ụfọdụ n'oge ugwu ugwu ugwu oyi vortex a na-eme ka ikuku oyi na-aga n'ihu na ndịda yana iyi mmiri jet. Nke a na-eme oge nile n’oge udu mmiri ma jikọtara ya na oke ebili mmiri oyi sitere na Arctic na United States. Oge oyi kachasị njọ na nke kachasị njọ ga-eme na Jenụwarị 2014.
Ihe omuma a nke meteorology bu ndi ozo nke no mgbe obula. Okwu a na-ewu ewu n'oge a n'ihi ojiji ndị ọkà mmụta ihu igwe ji ya mee ihe. Ndị ọkà mmụta sayensị a na-enyocha polar vortex site na nyocha ọnọdụ ndị na-eme ọtụtụ iri puku ụkwụ na mbara igwe. Otú ọ dị, mgbe ọnọdụ okpomọkụ ndị metụtara ihe ọmụmụ a nke ihu igwe na-agbadata, ọ na-emetụta ụfọdụ mpaghara ụwa. Ihe omume a abụghị naanị na United States, ọ na-adịkwa n'akụkụ ụfọdụ nke Europe na Eshia. Nanị ihe egwu nke ihe a nwere ike ịnọchite anya ndị mmadụ bụ etu okpomọkụ si ebelata, na-ezipụ ikuku oyi na-agbasa n'akụkụ ndịda nke anaghị ajụkarị oyi.
Dika o nwere ike imetuta mpaghara ndi oyi adighi, o bu ihe n’aru otutu ihe n’aru ndi mmadu na ndi ozo na umu anumanu. Agbanyeghị, atụla ụjọ mgbe ị nụrụ ozi gbasara polar vortex. Naanị ihe dị mkpa bụ ịkwadebe iji nagide okpomọkụ dị ala karịa nkịtị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịlele ihe ndị anyị nwere site na ngwa ngwa mberede na ụlọ na ụgbọ ala ka ha wee nwee ike imeghari na oge oge oyi ma hụ na ị nwere ike ịkwadebe maka ihe egwu egwu nke oke ifufe oyi.
Otu ihe kachasị na-ebute ihe gbasara ihu igwe bụ na Midwest nke United States na-agbaze. Mmetụta ọkụ na obodo ụfọdụ ruru gburugburu -50 degrees. Otú ọ dị, ezigbo okpomọkụ dị n'etiti -20 na -30 degrees. Ihe ndi ozo bu ihe omuma nke ikuku ikuku na-eme. Iji belata nsonaazụ nke ihe a, ọtụtụ obodo mepere ebe obibi kwesịrị ekwesị maka ụlọ ndị na-enweghị ike ichebe onwe ha nke ọma na oyi na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mechie. Tohapụ ikwu ụgbọ elu na-akagbu ụgbọ elu iji zere nsonaazụ na-adịghị mma na ihe ọghọm enwere ike.
Ihe si na polar vortex pụta
Ma ọ bụ na poor vortex a nke na-eme ka nsogbu dị ala gbara ya gburugburu nke ikuku ifufe na-agagharị na ọdịda anyanwụ, na-agagharị na ntanetị. N'ụzọ dị otú a, enwere ike idebe ya n'akụkụ okporo osisi maka ogologo oge wee bụrụ ikuku oyi. The ezigbo nsogbu na-ebilite mgbe eruba na-ebelata site na a na mberede okpomoku nke stratosphere. Igwe a na-ekpo ọkụ nke stratosphere na-eme ka igwe ikuku oyi gbasaa site na okporo osisi na ala latitude. Nke a ma ọ bụ nwee nsonazụ ya maka mpaghara anaghị ejikarị oyi. Osisi abụọ ahụ, anụmanụ na mmadụ ga-emegharị ka oge okpomọkụ a dị n'oge poor vortex na-ekpuchi.
N'ihi ya, mgbe stratosphere na-ekpo ọkụ na mberede, polar vortex anaghịzi akwụsi ike ma na-ezipụ ikuku polar na ndịda, na-emetụta ọtụtụ mpaghara nke United States yana iyi jet. Ihe omuma a abughi ihe ohuru, mana oge izizi ebiputara ya banyere edemede a bu n’afo 1853. debara aha na Jenụwarị 2014, ma ọ bụ ndị nke 1977, 1982, 1985 na 1989.
Tinyere oyi na oyi na-atụ na oke oyi, frosts nke dị ukwuu na-ebilite. Frost ndị a na-eme ka ihe siere ndị mmadụ ike ịma oyi. Fọdụ nsonaazụ ya n'ụzọ nke ndụ n'obodo mepere emepe bụ na a ga-egbutu okporo ụzọ n'ihi oke oke snow yana ụzọ ụzọ nkwukọrịta kwụpụ. E nwekwara ike eletrik na-ewepụ n'ọtụtụ ebe n’obodo ndị ahụ.
Curiosities nke polar vortex
A maara okwu a n'oge oyi nke 2014 n'ihi oke okpomoku nke metụtara North America.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ọ bụla nke ihe a mere, radius nke nwere oke ala ọ dị ihe dị ka otu puku kilomita.
Iji tụọ ọnọdụ na ọnọdụ nke polar vortex, a chọrọ ọtụtụ nha na oyi akwa nke ikuku.
Troortpic polar vortices dịkwa adị ma na-esighi ike n'oge ọkọchị ma sie ike n'oge oyi.
Ọ bụrụ na ihe a adịchaghị ike, ajọ ifufe na-efesi ike nke na-arị elu n'ebe ugwu na-abụkarị ntakịrị vortices n'ime polar. Obere vortices a na-abụkarị otu ọnwa.
Mgbawa ugwu mgbawa nke na-eme na ogbe nwere ike ime ka polar vortex sikwuo ike maka ọtụtụ oge oyi.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọhụụ a gbasara mbara igwe amachaala n'oge na-adịbeghị anya na ọ dị ezigbo mkpa ịmata mmetụta ya iji gbochie nsonaazụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ poor vortex
Kedu ihe bụ tombolo